Noho Nhyehyɛɛ​—Mbra Kwan Do Nkaabɔ | JW.ORG
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albania Mmum Kasa Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Iraq) Arabic (Jordan) Arabic (Lebanon) Arabic (Syria) Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Attié Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Northern) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bidayuh (Bukar) Bislama Bissau Guinean Creole Blackfoot Bomu Bosnian Britain Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Falam) Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinamwanga Congo Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Czech Dagaare Dangme Danish Dari Diola Dogon (Toro So) Douala Drehu Dusun Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo English (Borɔfo) Esan Estonia Mmum Kasa Estonian Ethiopia Mmum Kasa Ewe (Awona) Faroese Fataluku Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon Frafra French French Mmum Kasa Frisian Fulfulde (Cameroon) Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gun Guéré Haitian Creole Haya Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Irish Mmum Kasa Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kadazan Kalanga (Zimbabwe) Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Latgalian Latvia Mmum Kasa Latvian Lingala Lithuanian Logo Loma Low German Luganda Macedonian Macushi Madura Mahorian (Roman) Maithili Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Mam Mambae (Ermera) Mandinka Mandjak Mangbetu Maninkakan (Eastern) Mano Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazahua Mende Meru Mfantse Mingrelian Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nambya Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Mmum Kasa Netherlands Mmum kasa Newari Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Nivaclé Norwegian Nyaneka Nzema Obolo Oromo Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papel Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pehuenche Pemon Pennsylvania German Persian Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Poland Mmum Kasa Polish Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Albania) Romany (Argentina) Romany (Eastern Slovakia) Rungus Runyankore Russian Rutoro Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sehwi Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Shughni Sidama Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Susu Svan (Lower) Svan (Upper) Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Ticuna Tigrinya Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toupouri Turkish Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruguay Mmum Kasa Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Voru Wallisian Welsh Wichi Wolof Xhosa Yoruba (Alata) Yukpa
Mbra Kwan Do Nkaabɔ
© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Noho kwan nyinara yɛ hɛn dze.
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) na wɔayɛ wɛbsaet yi. Hɔn ara so na wɔhwɛ do. Akyerɛwee nye nsɛm fofor biara a ɔwɔ wɛbsaet yi do no yɛ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania hɔn egyapadze a wɔdze hɔn nyansa nye nyimdzee yɛe, gyedɛ wɔakyerɛ dɛ ofi beebi fofor.
Eguadzi Ahyɛnsewdze Ahorow
Adobe, Adobe ahyɛnsewdze no, Acrobat, nye Acrobat ahyɛnsewdze no nyinara yɛ Adobe Systems Incorporated eguadzi ahyɛnsewdze ahorow. iTunes nye iPod yɛ Apple Inc. eguadzi ahyɛnsewdze ahorow. Eguadzi ahyɛnsewdze a aka no nyinara yɛ edwumakuw ahorow bi dze.
Wɛbsaet Noho Nhyehyɛɛ Ahorow
Dɛm Nhyehyɛɛ yi na ɔkyerɛ mbrɛ ibotum dze wɛbsaet no edzi dwuma. Sɛ edze wɛbsaet no dzi dwuma a, ɔkyerɛ dɛ agye Noho Nhyehyɛɛ ahorow nyinara ato mu. Sɛ irunntum nngye wɛbsaet Noho Nhyehyɛɛ no nyinara nnto mu dze a, mma mmfa wɛbsaet no nndzi dwuma.
Ebɛyɛ dɛn dze wɛbsaet no edzi dwuma wɔ kwan a ɔfata do? Ibotum ahwɛ, atwẽ na aprint copyright mfonyin, elɛktrɔnik nwoma nye dza ɔkã ho, ndwom, mfonyin ahorow, nsɛm a wɔakyerɛw, video ahorow mu nsɛm wɔ wɛbsaet yi do dɛ mbrɛ Noho Nhyehyɛɛ tse no. Naaso, mbra mma kwan dɛ edze dza ɔwɔ wɛbsaet yi do no bedzi gua. Dza irunntum mmfa wɛbsaet no nnyɛ no bi na odzidzi do yi:
Mma mmfa wɛbsaet yi mu Nsɛm nnto intanɛt dwumadzibea fofor biara do;
Mma mmfa kɔmpiwta dwumadzi fofor biara nnsesã anaa mmbata wɛbsaet yi mu Nsɛm ho;
Mbra mma ho kwan dɛ ebɔtwẽ ndzɛmba efi wɛbsaet yi do na aasesã ne nyɛbea anaaso edze eedzi gua. Mma nnkyekyɛ kɔmpiwta dwumadzi biara a ɔbata wɛbsaet yi ho mma afofor;
Ɔnnsɛ dɛ edze wɛbsaet yi dzi dwuma dɛ edwindadze a wɔdze hwehwɛ nkorɔfo ho esuma mu nsɛm wɔ kwan biara do;
Mma mmfa kwan bɔn biara do nnkɔ wɛbsaet yi do gyedɛ kwan a wɔakyerɛ no do;
Mma nnyɛ biribiara a obotum asɛɛ anaa obesiw afofor kwan dɛ wɔdze intanɛt dwumadzibea yi bedzi dwuma; afei so ɔnnsɛ dɛ edze yɛ dza otsia mbra biara;
Dɛ edze wɛbsaet no bedzi gua anaa bata no, mbra mma ho kwan.
Noho Nhyehyɛɛ Yi A Ebɔtõ Ho Asotwẽ
Watchtower wɔ hokwan dɛ ɔtwẽ obiara a ɔtõ mbra a ɔfa wɛbsaet yi ho no aso. Asotwẽ a wobotum dze ama no bi nye dɛ: wobesiw wo kwan dɛ ebɔkɔ wɛbsaet no do, wobotwa kɔmpiwta biara a okitsa wo IP address no mu, anaa wɔdze wo bɔkɔ asɛndzibea.
Wotum Sesã Noho Nhyehyɛɛ No
Ofi ber to ber no, Watchtower tum sesã wɛbsaet Noho Nhyehyɛɛ no. Nsesã biara a wɔbɛyɛ wɔ wɛbsaet Noho Nhyehyɛɛ mu no befi ase aayɛ edwuma fi da a wobetsintsim fofor no. Mbrɛ ɔbɛyɛ a ibohu nsesã biara a wɔayɛ no, ma ɔfã ha nhia wo paa.
Mbra Nye Atsɛmbu
Wɛbsaet yi Noho Nhyehyɛɛ gyina New York, U.S.A. mbra do ɔmmfa ho mbrɛ mbra fofor biara tse no. Obiara a ɔbɔtõ wɛbsaet yi ho mbra no, wɔdze no bɔkɔ asɛndzibea wɔ New York, U.S.A.
Sɛ Noho Nhyehyɛɛ No Bi Tsia Mbra A (Severability)
Sɛ asɛndzibea bi a odzi mu kyerɛkyerɛmu dɛ wɛbsaet Noho Nhyehyɛɛ fã bi tsia mbra anaa onnkotum aayɛ edwuma a, afã fofor a ɔaka no bɔkɔ do ayɛ edwuma. Sɛ Watchtower enntum anntwẽ obi a ɔtõ wɛbsaet yi ho Nhyehyɛɛ ho mbra no bi aso a, ɔno nnkyerɛ dɛ Watchtower edwumakuw no ahwer tum a ɔwɔ dɛ ɔbɔtwẽ obi a ɔatõ wɛbsaet noho mbra no aso.
Wɛbsaet Noho Ahyɛmudze Nyinara
Wɛbsaet Noho Mbra yi nyinara yɛ ahyɛmudze a ɔkyɛn ahyɛmudze dedaw biara a ɔwo nye Watchtower ayɛ a ɔma inya hokwan dɛ edze wɛbsaet yi bedzi dwuma.